विष्णु पौडेल सरकारमा नजाने, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा को–को पर्दैछन् ? – Daunne News
विष्णु पौडेल सरकारमा नजाने, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा को–को पर्दैछन् ?
कतिपयले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार भएर काठमाडौं आउने हल्ला चलाएको भन्दै पोखरेल स्वयंले खण्डन गरेका छन् । उनले विष्णु रिमालनै सल्लाहकारको भूमिकामा रहने बताएका छन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका रिमालको विकल्प नखोजिने नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।